आज रविको बयान लिइँदै, अब के हुन्छ प्रक्रिया ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Aug 26, 201940
काठमाडौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सोमबार टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने र युवराज कँडेलको बयान लिइँदैछ ।
आत्महत्या प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले तीनजनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेपछि तीन जना आरोपीको बयान शुरु भएको हो ।
प्रहरीले मुद्दाको मिसिल बुझाएपछि आइतबार चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । यो मुद्दा चितवन अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा परेको छ ।
आइतबार ‘रुकु’ भनिने अस्मिता कार्कीसँग अदालतले बयान लिएको थियो । आज लामिछाने र कँडेलसँग बयान लिनेछ । बयान सकिएपछि सरकारी र आरोपी पक्षका वकिलले बहस गर्नेछन् ।
चितवन आसपासका क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी जम्मा हुन नपाइने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको आसपासका क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस एक ठाउँमा जम्मा भएर बस्न निषेध गरेको छ । कार्यालयले आइतबार राति आदेश जारी गर्दै आज बिहान ६ बजेदेखि उक्त नियम लागू हुने जनाएको हो ।